Little Myanmar: º For those myanmar in Singapore
º For those myanmar in Singapore
http://minneain.blogspot.com/ မှ ကူးယူ ဖော်ပြပါသည်။
စင်ကာပူ နိုင်ငံသားများရဲ့ သဘောထားမှန်
ဒီနေ. Straits Times သတင်းစာထဲမှာပါတဲ့ ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ်ကို မျှဝေပါရစေ၊၊ ဖတ်တဲ့သူတွေ လည်းသိပြီးပြီထင်ပါတယ် ၊၊ မဖတ်ရသေးတဲ့သူတွေ သိရအောင်ပါ ၊၊ဆောင်းပါးအရ မနေ့က Tanjong Pagar GRC မှာ လုပ်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲခေါ်မလား ၊ ရှင်းလင်းပွဲ ပြောမလား အဲဒီ အကြောင်းလေးပါ ၊၊ အဓိကကတော့ Singaporean တွေက Foreign worker တွေကို Complain တက်တဲ့ ရှင်းလင်းပွဲလို့ ပြောလို့ရမယ်ထင်ပါတယ် ၊၊ Debate လို့သုံးထားပါတယ် ၊၊ Forign-versus-local debate dominatedacommunity dialogue လို့အစပြုပြီး ရေးသားထားပါတယ် ၊၊ Local လို့ခေါ်တဲ့ Singaporean တွေက သူတို့ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးရတာဟာ Foreign Workers တွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ် လို စွပ်စွဲပါတယ် ၊၊ Some Singaporeans questioned the need for foreign workers , arguing that Singapore could survive without them . One even called for the Government to stop issuing work permit to them. အထက်က စာကြောင်းကတော့ တော်တော့ ကို ပြင်းထန်ပါတယ်၊၊ ပါမစ်ထုတ်မပေးဖို့ အစိုးရကို တွန်းအားပေးတာပါ ၊၊
ဒါပေမယ့် MOM Minister Mr Gan Kim Yong ကတော့ အသေအချာပြန်ပြောပါတယ် ၊၊ ကျွန်တော်တို့ စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်နေပါတယ် ၊၊ နိုင်ငံခြားသားတွေဟာ အသုံးလည်းဝင်ပါတယ် ၊ အရေးလည်းကြီးပါတယ် ဒါပေမယ့် စင်ကာပူ နိုင်ငံသားတွေ အတွက် ကူညီဖို့ အမြဲတမ်း နည်းလမ်းတွေ ရှာကြံနေပါတယ်တဲ့ ၊၊ နောက် သူက ဆက်ပြောတာကတော့ စင်ကာပူနိုင်ငံသား တွေ အလုပ်အကိုင်တည်မြဲရေးနဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံ စီးပွားရေး အထောက်အပံ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့ အရည်အတွက်ကိုလည်း ထိန်းညှို ဆောင်ရွက်သွားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ၊၊ ဆွေးနွေးပွဲပြီးတဲ့နောက် သတင်းထောက်တွေကို ပြောကြားရာမှာတော့ PM Mr Lee Hsien Loong မှ SMU Singapore Management University မှာ ပြောကြားသွားတဲ့ စကားလေးကို ပြန်ပြောသွားပါတယ် ၊၊
နောက်ထပ် စင်ကာပူနိုင်ငံသူ တစ်ယောက်ကတော့ " ဘာဖြစ်လို့ နိုင်ငံခြားသားတွေအတွက် လုပ်ကိုင်ခွင့်တွေ မရပ်ပစ် ၊ မပိတ်ပစ်တာလဲရှင် ၊၊ နိုင်ငံသားတွေအတွက် အလုပ်အကိုင် ရှာဖို့ အခွင့်အရေးတွေ နည်းပြီး အလုပ်လက်မဲ့တွေ များလာတာပေါ့ "Why not stop issuing work permits to foreign workers , so that unemployed locals will get the first bite of any job opportunity." ကျွန်တော်တို့အတွက် ဝမ်းသာစရာကောင်းတာက အလုပ်ရှင်တွေ က နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားတွေကို ပိုသဘောကျပါတယ်တဲ့ ၊၊ Ms Amelia Kang ဆိုတဲ့ အလုပ်ရှင်အမျိုးသမီးကတော့ စင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေ နဲ့ အလုပ်လုပ်ရတာကို ဒီလိုဆိုပါတယ် " ကျွန်မရဲ့ အလုပ်မှာ စင်ကာပူနိုင်ငံသား ၁၅ ယောက်ကို ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်စေခဲ့ပါတယ် ၊၊ တစ်နှစ်ကျော်အောင်လုပ်သွားတာ ၃ ယောက်ပဲ ရှိပါတယ် ရှင်" လို့ဘယ်လို လုပ်ရကိုင်ရ ခက်ခဲကြောင်း ပြောကြားသွားပါတယ် ၊၊နောက် အလုပ်ရှင် Mr Andrew Kang ကထောက်ခံပြောကြားသွားတာကတော့ နိုင်ငံသားတွေက မလုပ်ပေမယ့် နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားတွေက အချိန်ပို အလုပ်ဆင်းဖို့လည်း ဝန်မလေးကြပါဘူး တဲ့ ၊၊ Locals would be reluctant လို့ ဆိုပါတယ် ၊၊
နောက်ထပ် ခေါင်းစဉ်တစ်ခု ဆက်ဆွေးနွေးတာကတော့ စင်ကာပူနိုင်ငံသားနဲ့ ပီအာတွေပါ ၊၊ အခွန်တူတူဆောင် ရပါလျက် အခွင့်အရေးတူတူ မရတဲ့ အကြောင်း ပါ ၊၊ တော်တော် တော်တဲ့ စင်ကာပူ နိုင်ငံသားတွေ ပါ ဒီလို ပြန်ပြောပါတယ် "အခွင့်အရေး တူတူ လိုချင်ရင် နိုင်ငံသားခံလိုက်ပါလား" တဲ့ သူ့ဆောင်းပါးထဲမှာတော့ Singaporean later rose to challenge to PR လို့ သုံးထားပါတယ် ၊၊ နောက်ဆုံးမှာ Mr Gan ကပြောတာကတော့ နိုင်ငံခြားသား လုပ်သားတွေကို ပြန်ထုတ်ရမယ် ဆိုရင် စင်ကာပူ အနာဂတ်ကို ထိခိုက်ပါလိမ့်မယ် ၊၊ ကုမ္ပဏီတွေကို ဖိအားပေးပြီး နိုင်ငံသားတွေပဲ အလုပ်အကိုင်ပေးရမယ်လို့ဆိုရင်လည်း သူတို့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာမှာ ပိုမိုခက်ခဲစေပါလိမ့်မယ် လို့ ဆိုပါတယ် ၊၊ နောက်ဆုံးမှာ Mr Gan ဆိုသွားတာကတော့ " To keep foreigners out may be
very appealing to the locals , but it may not be the right approach for Singapore in the long term , because it will undermine the basic economic fundamentals ."
နောက်ဆုံးမှာထပ်ပြီး Mr Gan က သူရဲ့ Ministers နဲ့ MP တွေကို သေချာကွင်းဆင်းရှင်းလင်းပြဖို့နဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ စင်ကာပူနိုင်ငံကြီးသားတွေ အနေနဲ့ နားလည်းလက်ခံလာမယ်လို့ သူယုံကြည်ပါတယ်လို့ ပြောကြားသွားပါတယ် ၊၊ ဆောင်းပါးလေးရဲ့ ခေါင်းစဉ်ကတော့ Foreign v local debate gets airing ဆောင်းပါးရှင် သတင်းရေးသူ ကတော့ Aaron Low ဖြစ်ပါတယ် ၊၊ ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့ထုတ်သတင်းစာမှာပါတဲ့ ဆောင်းပါးလေးကို တင်ပြတာပါ ၊၊ မူရင်းကို ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်၊၊ အမှားအယွင်း အကျအပေါက် ကွဲလွဲမှူများ ပါဝင်ပါက ခွင့်လွှတ်ပါရန်ကြိုတင် တောင်းပန်ပါတယ် ၊၊ ဒီနိုင်ငံမှာ လာရောက်အလုပ်လုပ်သူချင်းမို့ ကိုယ်ချင်းစာ စိတ်လေးနဲ့ မျှဝေပေးခြင်းသပ်သပ်ပါ ၊၊ အင်္ဂလိပ်စာ ညံ့ သလို မြန်မာစာရေးလည်း မကောင်းပါဘူး ၊၊ PR သမားတွေ အတွက် သိပ် အရေးမကြီးပေမယ့် Pass Holder တွေ အတွက်တော့ အလုပ်မရှိတာနဲ့ နေထိုင် ခွင့်လည်း မရှိတော့ပါဘူး ၊၊ ဒါကြောင့်ပိုအရေးကြီးမယ်ထင်ပါတယ်အခုလို့ သူတို့နိုင်ငံသားတွေ အနေနဲ့ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားတွေ ပေါ်မှာ ထားတဲ့ သဘောထားကို သိရတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သွားသတိ ၊ စားသတိ ၊ လာသတိ ၊ နေသတိ ၊ ထိုင်သတိ ၊ အလုပ်ထဲမှာလည်း သတိနဲ့ လှုပ်ရှား ရတာပေါ့ ဗျာ ၊၊ အားလုံးရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ။
Posted by KS at 10:40 AM